कसरी नाक polyposis गर्छ
धेरै मानिसहरू अनुभव साँस मा कठिनाई, कारण उदाहरणका लागि, एकदम फरक हुन सक्छ जो, संक्रमण, एलर्जी वा sinusitis उपस्थिति। नाक मा polyps गठन गर्दा कुनै पनि मामला मा, उचित उपचार, नाक पासेसहरू, तर त्यहाँ समय हो। यो रोग नाक polyposis भनिन्छ र कारण एलर्जी, फंगल संक्रमण, वा चयापचय विकार गर्न, साथै सधैं छन् भन्ने स्पष्ट छैन अन्य कारण एक नम्बर मा हुन्छ छ।
कठिन, जसबाट कारण टाउको दुखाइ र थकान सास मानव नाक मा रोग को घटना मा, गन्ध को अर्थमा विचलित। नाक भीड को भावना polyps, खकार यसरी stagnates को गठन को चरण मा हुन्छ र nasopharynx मा विस्तार। सपना अवस्थामा नाक साँस परिणामस्वरूप, अवरुद्ध छ नाक मा सूक्खापना र घाँटी। Sneezing र आक्रान्त polyps अवलोकन छैन। यसरी, नाक polyposis व्यक्ति पैदा टाउको मा बारम्बार दुखाइ अनुभव, जो गरिब परिसंचरण गर्न मस्तिष्क मा नेतृत्व संक्रमण, सँगसँगै हुन सक्छ।
अन्य अवस्थामा, नाक polyposis निदान endoscopically वा rhinoscopy द्वारा निदान लागि, लौरा को परीक्षा, साथै एक्स-रे आवश्यक वा स्क्यान गर्नुहोस्। polyps मोबाइल भएकोले तिनीहरूले जांच वा भिडियो क्यामेरा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, र नाक गुहा मा आफ्नो वितरण को हदसम्म स्थापित गर्न। सामान्यतया, polyps माथिल्लो नाक खण्डमा फेला छन्। त्यहाँ पनि polyps को कारण स्थापित गर्न एलर्जी अनुसन्धानहरूले हुनुपर्छ।
नाक त्यहाँ विकास छ जो तथाकथित पारिवारिक polyposis, छ, यसबाहेक polyposis को intestines मा polyps को रोग को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, र पेट। कोलनले को प्रभावित भाग हटाउने यो रोग उपचार। समय परिवार polyposis व्यवहार गर्दैन भने, एक क्यान्सर रोग विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
पनि नाक मा nasopharynx मा नाक गुहा भर फैलाउन र भित्र पस्नु गर्न सक्षम छन् जो polyps, एक परिवार मा देखा पर्न सक्छन्। सामान्यतया, नाक polyps छैन क्यान्सर हो।
हाल, नाक polyposis को उपचार शल्य चिकित्सा र रूढिवादी दुवै छ। यो उपचार को सबै भन्दा साधारण विधि polyps सर्जरी समयमा निर्मूल छन्, र त्यसपछि जो उपचार को एक उपयुक्त मार्ग तोकिएको एक जटिल छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ।
polyps हटाउन बनाउन शल्य चिकित्सा, अक्सर चिकित्सकहरु तथाकथित पाश प्रयोग गर्नुहोस्। लुपमा यो प्वाल प्रयोग गरेर खोल्न सकिँदैन, कि त सञ्चालन बारम्बार गर्नुपर्छ जो एक drawback, छ। आधुनिक समयमा व्यापक शल्य अल्ट्रासाउंड, लेजर र radiowave सर्जरी अपनाए। सञ्चालन सञ्चालन पछि, यो, यो श्रव्य विज्ञ धाउन सिफारिस छ नाक गुहा उपचार गर्न आवश्यक छ , नाक lavage समाधान को लागि जो एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने वा mucolytic थपिएको छ गर्न। जब यी प्रक्रियाहरु तेल नाक घटेको र विभिन्न nanodiamonds उपयोग गरदै प्रयोग contraindicated छन्। यो एक corticosteroid उपचार प्रयोग गर्दछ। तथापि, polyps को उन्मूलन पछि, त्यहाँ तिनीहरूले फेरि फारम छैन भन्ने कुनै निरपेक्ष ग्यारेन्टी छ।
अर्को उपचार विकास, polyposis र antihistamines को प्रारम्भिक चरणमा हर्मोन योगों को प्रयोग हो। त्यहाँ एक व्यक्ति polyposis भोगिरहेका मा एलर्जी हो भने, एलर्जी हटाउनु तरिका प्रयोग।
यसरी, नाक polyposis अब मान्छे यस रोग को उद्भव र विकास गर्न योगदान कि allergens को एक किसिम उजागर गर्दै छन् भन्ने तथ्यलाई कारण एक साधारण रोग हो। आधुनिक चिकित्सा पर्याप्त साधन र यसरी सजिलो सास फेर्न एक व्यक्ति मौका दिने, नाक मा ट्यूमर निर्मूल गर्न सक्षम छन् कि उपचार को तरिका छ।
तपाईं कर्णक्ष्वेड महसुस हुँदा के गर्ने?
वृद्ध मा हिप भंग - को जूरीको फैसला छ?
मिर्गी: आक्रमण र उपचार
छाला च्याउ आफ्नो हात मा र कसरी यो किन निको पार्न गर्छ?
Midge क्षति - यो त निर्दोष थियो ...
Viko Dzhambattista: जीवनी र काम
स्वादिष्ट र सुन्दर सलाद "सेतो हंस"
कान सुधार: सङ्केत गर्छ, प्रक्रिया विवरण, समीक्षा
यो मानिस आफ्नै गिर्जाघर निर्माण गर्न 56 वर्ष बिताए
आँखाको टुप्पो (स्प्रे हुँदै): प्रविधि, विशेषताहरू र समीक्षाहरूको विवरण
"लस्ट केटी": अभिनेताहरु र वर्ण
वाहन मा immobilizer के छ र के यसको लागि हो
उबला माछा सलाद
स्थायी मेकअप eyebrows: यो के हो, रूपमा गरिन्छ राखिएको कति छ? स्थायी मेकअप घरमा eyebrows: पहिले र फोटो, contraindications पछि। स्थायी मेकअप भौं बनाउन चाहे?
ऋण पुनर्वित्त के हो